जाडो जाडोबाट बच्न स्पेनमा १० ठाउँहरू यात्रा समाचार
जाडो जाडो बाट जोगिन स्पेनमा १० ठाँउहरु
Susana Garcia | | स्पेन शहरहरू, España, सामान्य
हामी भित्र छौ पूर्ण चिसो तरंग, र सत्य यो हो कि हामी सबै गर्मी मौसम, त्यो ताप र समुद्री तटका दिनहरूमा फर्कन चाहन्छौं। उत्तरी, मध्य र हिमाली क्षेत्रहरूमा जहाँ उनीहरू चिसो हुँदै गइरहेका छन्, र निश्चित रूपमा धेरैले पहिल्यै कतै थोरै न्यानो पुग्ने ठाउँमा जाने ठाउँ बनाउने सोचेका छन्। त्यसकारण हामी तपाईलाई केहि विचार दिन लाग्दछौं।
त्यहाँ धेरै गन्तव्यहरू छन् जसले हामीलाई अधिक ताप दिन्छ स्पेन छोडेर पनि। र यो यो छ कि हामीसँग हेर्ने सुन्दर ठाउँहरू छन् र ठाउँहरू छन् जहाँ मौसम यी तिथिहरूमा थोरैसँग आउँदछ, जाडो जाडोबाट बच्न सक्षम हुन। न्यानो वातावरणको आनन्द लिन र ग्रीष्म aboutतुको बारेमा सोच्न सक्षम हुनको लागि यी १० गन्तव्यहरूको नोट लिनुहोस्।
Cádiz हराउन को लागी एक सुन्दर शहर हो। यससँग व्यक्तिहरू छन् जसले हामीलाई सहज महसुस गर्न मद्दत गर्छन्, र पुरानो क्षेत्र जहाँ तपाईं साना पसलहरू र मध्य वर्गहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं टेरेसमा र घाममा पिउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि स्पष्ट रूपमा मौसम गर्मी जस्तो छैन र हामी प्रसिद्धको पानीमा नहुन सक्छौं Caleta समुद्र तटहो, हामी यी सबै वातावरणहरू देख्न सक्छौं। र यदि हामी पानी खेलहरू जस्तै काइटसर्फि ofका प्रशंसक हौं भने, हामी आदर्श स्थानमा छौं।
यदि हामी प्रायद्वीप छोड्छौं भने हामी सिउटा जान सक्छौं, यो स्थान जहाँ अन्य संस्कृतिहरू मिसिन्छन् र जसमा हामीलाई धेरै प्रस्तावहरू छन्। शाही भित्ताहरू हेर्नुहोस्, जसले हामीलाई समय बित्यो, वा भूमध्य पार्कको माध्यमबाट टहल्यो। त्यहाँ साना टापुहरू पनि छन्, जस्तै पेरेजिल वा सान्ता क्याटालिना। हामी माच हचोमा पैदल यात्रा पनि गर्न सक्दछौं, र हामी मोरक्कोको पनि निकट हुनेछौं, यदि हामी एउटा अर्को बाटोमा जान चाहन्छौं भने।
मेलिला अफ्रिकी महादेशमा अवस्थित अर्को शहर हो जुन स्पेनको हो र हामी यस बर्षको लागि ईर्ष्यालु समयको आनन्द लिन सक्छौं। हामी हर्नान्डेज पार्क भएर हिंड्न सक्छौं, तर यसको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण मध्ये एक हो १th औं शताब्दीको गड। यो अझै चार मूल चार पर्खाल संलग्नहरू छन्। हेर्नको लागि अन्य स्थानहरू प्लाजा डे एस्पाना वा सैन्य संग्रहालय हुन्।
एलिसेन्टमा यस समयमा यो अझै पनि चिसो छ, यो सत्य हो, तर मध्य वा उत्तरका केही शहरहरू जत्तिकै चिसो छैन, त्यसैले यो एक साताको अन्तमा यात्राको लागि राम्रो विचार हुन सक्छ। हामी पुरानो जान सक्नुहुन्छ सान्ता बार्बराको महल, जहाँबाट दर्शनीय दृश्यहरू छन्, र तबारका टापु हेर्नुहोस्, स्थान पनि जुन एक प्राकृतिक पार्कको रूपमा हेर्नुपर्दछ।
Ibiza ती रोचक गन्तव्यहरू मध्ये अर्को हो जुन हामीले जाडोमा फेला पार्छौं। यस टापुमा ग्रीष्म inतुमा त्यति वातावरण छैन, तर यसलाई हेर्ने यो अधिक आरामदायी तरीका हो। हामी समुद्री किनारमा जाने छैनौं तर हामी चुपचाप हिंड्न सक्छौं Dalt Vila र मूल्यहरू कम मौसममा धेरै छोड्ने कुरामा निश्चित छन्। त्यहाँ धेरै शान्त कुनाहरू, शहरहरू र समुद्री तटहरू छन् ग्रीष्म goतुमा बिना नै हेर्नका लागि, जब सबै चीज पर्यटकहरूले भरिएका हुन्छन्।
क्यानरी टापुहरूमा हामी चिसो जाडोबाट बच्नको लागि अर्को शिरा भेट्टायौं। र यस अवस्थामा हामी समुद्र तटमा पनि जान सक्छौं, किनकि यी टापुहरूमा तापक्रम २ 25 डिग्री हुन सक्छ। Fuerteventura ती मध्ये एक हो, अनिवार्य भ्रमणको साथ तिन्दया माउन्ट गर्नुहोस्, वा प्रसिद्ध कोफेट बीच। तपाईं साना शहरहरू, जस्तै एल कोटिलो, वा ला एम्प्युइटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
लान्जारोट अर्को गन्तव्य हो जुन गर्मीमा भीड हुने झुकाव हो, तर सबै बर्ष भर राम्रो मौसमको आनन्द लिन्छ। यस टापुमा हामी कालो बालुवा समुद्री किनारहरू उपभोग गर्न सक्दछौं, तर त्यस्ता भ्रमणहरू पनि Timanfaya राष्ट्रीय पार्क, वा Cueva de los Verdes, सुरंग कोरोना ज्वालामुखी द्वारा बनाईएको।
टेनेरिफको टापुमा हामीसँग ठूलो मौसमको साथ एक सबै वर्षको प्रस्ताव छ। हामी केवल होटल पूलको आनन्द लिने छैनौं, तर प्लेआ डे लस क्रिस्टियानो वा ला तेजीता जस्ता तटहरू पनि। को Teide भ्रमण यो आवाश्यक हुन्छ, यसको केबल कारमा माथि टापुको अविश्वसनीय दृश्यहरू हुन। हामी लोरो पार्क वा सियाम पार्क, धेरै रमाइलो पानी पार्क पनि हेर्न सक्दछौं।
हामी अहिले प्रायद्वीपको दक्षिणतिर गइरहेका छौं, र मालागा जाडो मौसममा राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ। मौसम अझै रमाइलो गर्न राम्रो छ कोस्टा डेल सोल, तर यदि त्यहाँ समुद्री किनार दिन छैन, हामीसंग अन्य चीजहरू छन्, जस्तै अल्काजाबा वा रोमन थिएटर हेर्दै।
अर्को दक्षिणी शहर जुन हामीलाई धेरै रोचक चीजहरू प्रदान गर्न सक्दछ। सेभिलमा हामी केवल एउटा धेरै रोचक पुरानो क्षेत्र फेला पार्दैनौं, तर त्यहाँ धेरै स्मारकहरू छन्, जस्तै जिराल्डा, टोरे डेल ओरो वा वास्तविक अल्काजार.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » जाडो जाडो बाट जोगिन स्पेनमा १० ठाँउहरु
मारिया डेल मार्च भन्यो
माफ गर्नुहोस् तर तपाईंले Almería उल्लेख गर्न बिर्सनुभयो। आज दिउँसो दुई बजे यो १ 18 डिग्री थियो
मारिया डेल मार्चलाई जवाफ दिनुहोस्
ग्लोरिया रोड्रिग्ज भन्यो
सुसाना, मैले तपाईंलाई भनेको छु कि ग्रान क्यानारिया एक टापु हो जुन विश्वको सर्वश्रेष्ठ वायुमण्डलको कारण चिनिने वायुको कारणले चल्दछ जुन यसमा सबै वर्ष भरि सुखद वसन्त तापमान रहन्छ र स्पष्ट पार्छ कि प्लेआ डेल ईन्ग्लस टेनेरिफमा छैन तर Gran Canaria मा।
Gloria Rodríguez लाई जवाफ दिनुहोस्
सत्य यो हो कि यो लाजमर्दो छ, एक यात्रा पृष्ठ, र तिनीहरूलाई समुद्र तट वास्तवमा कहाँ हो भनेर थाहा छैन। यो पढ्ने बित्तिकै म धेरै निराश भएँ किनकि मलाई लाग्थ्यो कि म एउटा रोचक लेख पढ्दैछु। Playa del Inglés, सम्पूर्ण क्यानरी द्वीपसमेत मध्ये एक उत्तम, Gran Canaria टापुमा छ, टेनेरिफमा होईन। सल्लाहको एक टुक्रा: आजकल विरोधाभासी जानकारी कुनै पनि गाह्रो छैन र यो आवश्यक छ। शुभकामना
राकेललाई जवाफ दिनुहोस्
र तपाईं मलाई लस क्यान्टेरास बीचको बारेमा बताइरहनु भएको थियो?
Gran Canaria केवल एक र बेमेल हो।
हामी उत्कृष्ट तापमानको आनन्द लिई रहेका छौं।
आउनुहोस्, म यो सिफारिस गर्दछु।
जुआन रेस भन्यो
लाजको !! Playa del Inglés Gran Canaria मा छ। र फुर्तेभेन्टुरामा त्यहाँ कुनै माउन्ट छैन। भनिन्छ मोन्टाना डे टिन्डाया ... यसले थोरै पत्ता लगाउन धेरै लिदैन।
जुआन रेसलाई जवाफ दिनुहोस्
के तिनीहरूले हामीलाई Playa del Inglés… लुटे?
बेलिंडालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं राम्रो मौसमको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ भने, अल्मेर्वा बाहेक र हामीले मर्सियन मौसमको पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। हिजो जस्तो दिउँसो तापमान १° डिग्री भन्दा बढी
प्लेआ डेल ईन्ग्लस टेनेरिफमा होइन तर ग्रान क्यानारियामा छ, तपाईंले ठाउँहरू जाँच गर्नुपर्नेछ
क्लिपरलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्दैन कि तपाईलाई थाँहा छ कि साँचो कोस्टा डेल सोल ALMERÍA छ जहाँ एक बर्षमा धेरै घण्टा घाम लाग्छ र वर्षभरि स्थिर तापमान। उसले सधैं हामीलाई बिर्सन्छ। कस्तो लाज यति अज्ञान।
रफालाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छैन तपाईले कहाँ अध्ययन गर्नु भएको छ तर म तपाईलाई ० दिन्छु ALMERÍA लाई बिर्सियौं जहाँ हामीसंग सम्पूर्ण प्रायद्वीपमा सबै भन्दा राम्रो तापक्रम छ यद्यपि यसले धेरैलाई चोट पुर्‍याउँछ ...
Loli लाई जवाफ दिनुहोस्
सुसाना तपाईले स्पेनलाई थोरै राम्रोसँग चिन्नुपर्दछ किनभने "स्पेनीस दक्षिणपूर्व" लाई उल्लेख नगरी, हामी मौसमका मानिसहरूले हामीलाई बोलाउने कुराबाट थकित भएकाले, अल्मेरिया र मर्सिया प्रायद्वीपमा अधिकतम तापक्रम र बढी घण्टा धूपको साथमा हिउँदका प्रान्तहरू हुन्। । म तपाईंलाई यहाँ केहि यात्रा गर्न आमन्त्रित गर्दछु।
फ्रान्सिसलाई जवाफ दिनुहोस्
एना इसाबेल ग्वाडलुपे सानब्रिया भन्यो
बर्ष बितेर जान्छ र हामी भाग्यशाली टापुहरू बन्न जारी रहन्छौं, तर बिर्सिएका सज्जनहरू, अ beach्ग्रेजी समुद्रतट ग्रान क्यानारियामा छ, र म पनि यस टापुको सर्वश्रेष्ठ समुद्री तट हो भन्ने टिप्पणीसँग सहमत छैन। यसको आकर्षण र यसको अद्भुत तटहरू। लेख लेख्नु अघि आफै कागजात गर्नुहोस्। धन्यबाद।
Ana isabel guadalupe sanabria लाई जवाफ दिनुहोस्
खैर, यति मूर्खको बीचमा केहि पनि छैन जसले प्रकाशित गर्छ कि प्लेआ डेल ईन्ग्लस टेनेराइफमा छ मलाई यो विश्वास गर्नै पर्दछ ... खैर, त्यहाँ3मात्र छैनन् जुन राम्रो मौसमको साथ, तिनीहरू सबै हुन्, त्यसैले अर्को पटकको लागि क्यानरी टापुहरू मात्र राख्नुहोस् र तपाईं भौगोलिक रूपमा अशिक्षित नदेखेको प्लेटा डेल इles्गलको साथ टिडेमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
Susana Garcia भन्यो
हो, मैले गल्ती गरेको छु जुन पहिले नै निश्चित गरिएको छ। म कसैलाई चित्त दुखाएकोमा दु: खी छु, यदि त्यस्तो भएको भए हो तर होइन, म स्पेनको प्रत्येक बुँदालाई हृदयले चिन्दिन। जे भए पनि एन्टोनियो, मलाई लाग्छ अपमान गर्नु आवश्यक थिएन किनकि हामी सबै मानव हौं र हामी गल्ती गर्न सक्छौं, हैन त?
बेलफास्ट र डब्लिन भ्रमण गर्नुहोस्
लन्डन र एडिनबर्ग भ्रमण गर्नुहोस्